I-Apple's Fumana i-My's iyakulibaziseka kwi-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max | Ndisuka mac
I-Apple's Fumana i-My's iyakulibaziseka kwi-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max
Inketho yokufumana i-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max ebhengezwe ukuba izakufumaneka kungekudala uya kuva ubunzima kulibaziseko lwayo emva kokuba inkampani yaseCupertino ibhengeze ebutsheni balo nyaka.
I-Apple's Fumana i-My eyayifanele ukuba isondele ekubeni ifumaneke kwi-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max, iphinde iphinde iphinde ilibaziseke kulwaziso lwayo kwaye ngoku ibonisiwe kwiwebhusayithi ye-Apple emva kwexesha "lekwindla" ngaphandle komhla othile. Ngale ndlela i-Apple ayibonisi nasiphi na isizathu soku kulibaziseka okuncinci kumiliselo, kodwa imisebenzi eliqela ye-iOS 15 ayizukufumaneka kude kube sekupheleni kwalo nyaka, njengeSabeloPlay, iLifa loQhagamshelo, ukukwazi ukongeza ilayisensi yokuqhuba okanye Isazisi kwi-wallet app, kunye nezinye.
Ukufumana ii-AirPod ezilahlekileyo kuya kufuneka zilinde ithutyana
Izinketho zokufumana ii-AirPod ezilahlekileyo ziya kuhlala ziphantse zafana nezinye iimveliso ze-Apple, iiMac, i-iPhone, i-iPad, iApple kunye nayo iya kusebenza. njengokuba kunjalo ngoku kubahlali be-AirTag.
Oku kuthetha ukuba ukongeza ekubeni "Khangela" ukhetho olusebenzayo xa i-iPhone ikufuphi siphulukana neefowuni kwaye umntu odlula nge-iPhone, i-iPad okanye iMac ezi ziya kudityaniswa ngendlela yabucala yokuthumela indawo kumniniyo. Ngokucacileyo ngaphandle kwesidingo sokwenza nantoni na kwicala lomthumeli kunye nomamkeli wesaziso.
UkuKhangela okuthe ngqo kuya kubetha ii-headphones ngamanye amaxesha kulo nyaka kuya kuba lula ukuzifumana kwimeko yelahleko ngokusebenzisa iimpembelelo ezikwisikrini. Okwangoku yonke into imisiwe kwaye ayisebenzi ngokusemthethweni kuhlobo lwe-beta ye-iOS 15, Kungenzeka ukuba siza kuba neendaba ezintsha kungekudala kodwa okwangoku kufuneka silinde.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Apple's Fumana i-My's iyakulibaziseka kwi-AirPods Pro kunye ne-AirPods Max
Ukwandiswa kwe-Apple Care + kufikelela eSpain, phakathi kwamanye amazwe.
I-Apple iyaqhuba rhoqo ukubuyela emsebenzini kuvavanyo lwe-COVID ngo-Okthobha